Kacha mma Gear Laser akara igwe BL-MG-IPG100W Manufacturer and Factory | Boln
Akpan eji maka osise ígwè moto Kwadobe ， kacha osise miri bụ banyere 0.5mm. The graphic bụ ka o doro anya na anya mgbe ọtụtụ usoro. Applicdị bara uru dị 50mm-520mm
1.The dum na-akanye na osise usoro na-kpamkpam mere nke welded, agbatị na milled ígwè. Nke a na-eme ka o kwe omume ịmepụta akụkụ dị ogologo oge, ma na-ekwe nkwa oke nkenke na usoro akara laser, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere mmetụta na mberede ma ọ bụ mgbanwe ndị a na-ahụghị ama nke akara ahụ.
2.Adopting elu auto-n'ilekwasị anya technology, marking software nwere ike na-akpaghị aka idekọ bụla ngwaahịa si na-elekwasị anya kwa. Mgbe ị na-agbanwe ngwaahịa dị iche iche, akụrụngwa nwere ike ịhazigharị na-akpaghị aka na-enweghị ọrụ aka
3.N'ime mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ n'akụkụ abụọ, ndị na-arụ ọrụ kwesịrị itinye ihe nkedo n'elu ikpo okwu, mgbe ahụ akụrụngwa ga-akpachi ya ma ghọta ọnọdụ dị n'etiti, na-edozi nsogbu nkwụsịtụ nsogbu nke ntuziaka na-emezi ma melite akara ngosi akara
4.Na mgbakwunye na ịba ụba na arụpụta ihe, onye ahịa ahụ chọkwara inwe ike ịlele ogo akara dataMatrix. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji jikọta onye na-agụ koodu n'okpuru isi laser, nke na-enye echiche dị oke obosara, zuru oke maka ịgụghachi koodu 2D (DMX, QR) yana maka itinye akara na obere ihe. Anyị ahaziri software-enye gị ohere ozugbo ịhụ ogo akara na àgwà nke ọrụ na ileba anya.
5.Germany webatara 100W IPG fiber laser iyi nwere ike nweta ezigbo nsonaazụ miri emi ma rụọ ọrụ nke ọma.
6.Ihe ngosi ahọpụtara sọftụwia sọftụwia na usoro MES nwere ike bulite data ngwaahịa ma mezie ọnọdụ akara akara na akpaghị aka.
Nnukwu ngwa: 1090mm x 1150mm x 1890mm
Obere gia: 640mm x 800mm x 2100mm
Nke gara aga: Die Castings Laser akara Machine
Osote: Gear aro Laser akara Machine BL-MGS-IPG100W